အမျိုးအစားနိမ့်တဲ့ FWD ကားတွေ အထိ အရောင်ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ဖန်တီးပေးလာတဲ့ BMW! – MyMedia Myanmar
အမျိုးအစားနိမ့်တဲ့ FWD ကားတွေ အထိ အရောင်ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ဖန်တီးပေးလာတဲ့ BMW!
ကားရဲ့ အရောင်တွေကို ထူးထူးခြားခြား ဖန်တီးပေးလာတာ BMW အတွက် အတော်လေးအချိန်ကြာလာပြီ ဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် မော်ဒယ်နိမ့် ကားတွေ အထိပါ ယူဆောင်ပေးလာနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အခုလို သီးသန့် အရောင်ကွဲလေးတွေ တစ်ရောင်ချင်းစီ ဖန်တီး ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ကိုတော့ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ကားတွေဆီကို ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပြီး 1 Series Hatchback နဲ့2Series Gran Coupe တို့ ပါဝင်လာပါပြီ။ ယခင်တုန်းကတော့ အခုလို အရောင်ကွဲ တစ်မျိုးစီ ‌‌ရွေးချယ်နိုင်ဖို့က မော်ဒယ် မြင့် ကားတွေမှာသာ ရရှိ နိုင်တာ ဖြစ်ပြီး UKL2 Platform တွေမှာ အခြေခံထားတဲ့ Front-Wheel Drive ကားတွေမှာသာ အများစု ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကား မော်ဒယ်နှစ်ခုအတွက် San Marino Blue ၊ Speed Yellow ၊ Verde Ermes Green နဲ့ Audi-Esque Nardo Gray အရောင်တို့ အပြင် စုစုပေါင်းအရောင် ၁၆၀ မျိုးလောက် အထိကို ရွေးချယ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ‌အရောင်တွေကို ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ အရောင် Color Palette အကြီးစားတွေကို အသုံးပြုထားတာကြောင့်မို့လို့ ခြစ်မိကုတ်မိရုံနဲ့ အရောင်ပြယ်ဖို့ရာ ဖြစ်နိုင် ချေနည်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုဆိုရင် အဆိုပါ ကားနှစ်စီး အတွက် အရောင် ကွဲတွေကို သာမက အခြားသော ပိုကြီးပြီး ဈေးလည်းပိုများတဲ့ BMW တွေအတွက် အရောင်ကွဲတွေကိုပါ အွန်လိုင်း ကနေ တစ်ခါတည်း ကြည့်ရှုရွေးချယ် နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမနီ နိုင်ငံက လိုက်ပ်ဇစ် စက်ရုံမှာတော့ အဆိုပါ Entry-Level Model တွေ အတွက် အရောင်ကွဲတွေ ရရှိဖို့ ထုတ်လုပ် ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ယခု နှစ်ကုန်ပိုင်း အထိကို အော်ဒါတွေ လက်ခံပေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ BMW ဂျပန် ကတော့ 118d ရဲ့ အစီးရေ ပေါင်း ၁၈၀ လောက်ကို အရောင်ကွဲ တွေ ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး Sepia Violet ၊ Ruby Red နဲ့ Hockenheim Silver အရောင်တွေလည်းပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ရရှိသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ အရောင်တစ်ခုချင်းစီကိုမှ အကြိုက် မတွေ့သေးဘူး ဆိုရင်လည်း BMW ကနေ Customers တွေ စိတ်ကြိုက်ကို ရွေးချယ်ဖန်တီးပေးနိုင်အောင် လုပ် ပေးဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဆိုပါ အရောင် ၁၆၀ လုံးထဲက မှ သင့်ရဲ့ 1 Series Hatch ဒါမှ မဟုတ်2Series Gran Coupe တို့ကို အလှမဆင်ချင်သေးပဲ Fully Bespoke Paint ကို ဖန်တီးချင်သေးတယ် ဆိုရင်တော့ အချိန် နည်းနည်းပိုယူရနိုင်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ အဆိုအရတော့ ကားကို အလုပ်အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ၁၀ ပတ် လောက် နောက်ထပ် ပိုယူရနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
BMW ကတော့ Matte အရောင်တွေကို အတော်လေး ပေါ်လွင်ပြီးထင်ရှားတဲ့ အရောင်တွေအဖြစ် မှတ်ယူထားပြီး ထိခိုက်မှုတွေ ချို့ယွင်း ချက်တွေ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် သာမန် Glossy Finish တွေလိုမျိုး ပြင်ဆင်နိုင်မှာ မဟုတ်တာ ကြောင့်ပါ။ ကားအသစ်တစ်စီးကို Frozen Orange ဒါမှမဟုတ် Frozen Black ကိုမှ Matte အဖြစ်ဆေးသုတ်မယ် ဆိုရင် သာမန် လုပ်ငန်းစဉ်တွေထက် နာရီဝက်လောက်တော့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရဦးမှာပါ။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ယေဘုယျ ပြောကြား ချက် အရတော့ အဝါရောင် ၊ ခရမ်းရောင် ၊ အနီရောင် နဲ့ အပြာရောင်တွေက ပိုပြီးတော့ လူကြိုက် အများဆုံး ဖြစ်တယ် လို့သိရပါတယ်။ နောက်ထပ် အခုလိုမျိုး Treatment အလန်းစားကို ရရှိလာဦးမယ့် ကားကတော့ M2Coupe ဖြစ်တယ် လို့သိရပြီး ယခု လတ်တလော အရင် ရရှိလာမယ့် Front-Wheel Drive ကား နှစ်မျိုးရဲ့ အထက်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အခု Standard2Series Coupe ကားတွေကို Individual Hues တွေ ပါဝင်လာမယ့် အရောင်တွေနဲ့ ပိုမို အလှဆင် နိုင်ဖို့ ခန့်မှန်းရပေမယ့် ဒုတိယမြောက် မျိုးဆက်2Series Active Tourer Minivan လိုကားမျိုးကို Fancy ဆန်ဆန် အရောင်လေးတွေ သုံးလာပေးမယ် ဆိုရင်တော့ အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းနေမှာ သေချာပါတယ်။
The post အမျိုးအစားနိမ့်တဲ့ FWD ကားတွေ အထိ အရောင်ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ဖန်တီးပေးလာတဲ့ BMW! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-24T16:00:46+06:30August 24th, 2021|MYCARS MYANMAR|